Nnukwu ihe egwu dị egwu: Hong Kong amachibidoro ụgbọ elu ndị njem niile si UK
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong » Nnukwu ihe egwu dị egwu: Hong Kong amachibidoro ụgbọ elu ndị njem niile si UK
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ka Hong Kong na-achọ igbochi mgbasa nke ụdị dị iche iche nke COVID-19, ndị ọchịchị SAR wepụtara UK dị ka "nnukwu ihe egwu".
A ga-amachi ndị nọrọla na UK ihe karịrị awa abụọ ịbanye n'ụgbọ elu ndị njem gaa Hong Kong.
Hong Kong gosipụtara ụdị ikpe dị iche iche nke Delta na mpaghara izu gara aga.
Ugbo elu nke ụgbọ elu UK na-abịa ka Hong Kong na-achọ izu ike iji gboo mkpa ndị ọzọ.
Gọọmentị Hong Kong kwupụtara na Mọnde na a ga-amachibido ụgbọ elu njem niile sitere na UK ịfe na Hong Kong Nlekọta Ọchịchị Na-amalite Thursday.
As Hong Kong na-achọ igbochi mgbasa nke ụdị ọhụrụ nke COVID-19, ndị ọchịchị SAR wepụtara UK dị ka "nnukwu ihe egwu dị egwu" n'ihi "nlọghachi nso nso a banyere ọnọdụ ọrịa na UK na ụdị nje virus Delta dị iche iche gbasaa ebe ahụ".
N'okpuru nhazi ọkwa ọhụrụ, ndị nọrọ na UK maka ihe karịrị awa abụọ ka amachibidoro ịbanye n'ụgbọ elu ndị njem gaa Hong Kong.
Hong Kong gosipụtara ụdị ikpe dị iche iche nke Delta mbụ na COVID n'izu gara aga, na-ejedebe ụbọchị iri na isii nke okwu ikpe efu.
Mgbochi ọhụrụ bụ nke ugboro abụọ gọọmentị Hong Kong amachibidoro ụgbọ elu si UK iwu, na-eso mmachi amachibidoro na Disemba gara aga.
Mmachibido iwu ahụ bịara n'etiti esemokwu dị n'etiti UK na China gbasara Hong Kong na-achịkwa onwe ya.
Ihe kpatara mgbochi ụgbọ elu a bụ amụma gọọmentị setịpụrụ iji gbochie ndị iche iche coronavirus ịgbasa na Hong Kong.
A nkwusioru nke ụgbọ njem na-amanye onwe ya ma ọ bụrụ na mmadụ ise ma ọ bụ karịa na-abata site n'otu ebe nwalee nti na mbata maka otu coronavirus variant, ma ọ bụ a dị mkpa mmụba nje n'ime ụbọchị asaa.
A na-enyekwa mmachibido iwu ma ọ bụrụ na ndị njem 10 ma ọ bụ karịa si n'otu ebe kwenyesiri ike na ha bu coronavirus site na nyocha ọ bụla, gụnyere ule emere n'oge mgbochi, n'ime ụbọchị asaa.
UK kọrọ na mmadụ 14,876 nwalere ihe ọma maka coronavirus na Sọnde, ebe ọ hụrụ ntopute na nso nso a na ọrịa. Ekwenyela na ihe karịrị nde mmadụ anọ ka ọrịa ahụ malitere.
Hong Kong, bụ onye nyere iwu ka ewepụ iche ụbọchị iri abụọ na otu maka ndị mbata si n'ọtụtụ mba wee mejuputa iwu na-agbasaghị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, kọọrọ akụkọ ọhụrụ atọ nke coronavirus na Mọnde. O gosiputala ngụkọta nke 21 ikpe kemgbe ọrịa a malitere.
Ugbo elu nke ụgbọ elu UK na-abịa ka Hong Kong na-achọ ịbelata usoro iche iche maka ọtụtụ mba ndị ọzọ, gụnyere US na Canada.